न्युजिल्याण्ड आक्रमणको पाकिस्तानद्धारा घोर भर्त्सना : भारतले किन दिएन कुनै प्रतिक्रिया ! « Janaboli
न्युजिल्याण्ड आक्रमणको पाकिस्तानद्धारा घोर भर्त्सना : भारतले किन दिएन कुनै प्रतिक्रिया !
काठमाडौ । न्युजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चस्थित एउटा मस्जिदमा आतङ्ककारी समूहले शुक्रबार गराएको विष्फोटमा परी कम्तीमा ४९ जनाको मृत्यु भएको न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री यासिन्दा अडर्नले जानकारी गराउनुभएको छ । उक्त आक्रमणमा परी ५० जना घाइते भएका बताइएको छ ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार मृत्यु हुनेमा ६ जना भारतीय नागरिक हुन सक्छन् । नेपालबारे कुनैं जानकारी आएको छैन । जीयो न्युजका अनुसार पाकिस्तानका ४ जना नागरिक गम्भिर घाइते भएका छन् भने ५ जना हराइरहेका छन् । यस घटनालाई लिएर विश्वका हरेक देशले दुःख व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादको कुनै जात, धर्म नहुँने भन्दैं सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालले पनि घटनाको घोर भत्सर्ना गरेको छ ।
यस घटनालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुनै प्रतिकृया देखिएको छैन । उनले ट्विटरमा लगातार निर्वाचनको प्रचार गरेको मात्रैं देखिएको छ । इमरान खानले ट्विट गर्दै यस्तो लेख्नुभएको छ, ‘शङ्काले र क्राइस्टचर्चस्थित न्यूजील्याण्ड, मस्जिदहरूमा भएको आतंककारी आक्रमणको कडा दृढतापूर्वक निन्दा गर्दछ ।
यसले हामीलाई कुन कुराको निरन्तरता दिएको छ भने आतंकवादसँग कुनै धर्म छैन । पीडितहरू र तिनीहरूका परिवार जनहरूमा प्राथर्ना ।’ उहाँ लामो समय देखि आतंकवाद विरुद्धको लडाई लडिरहनु भएको छ । खान युद्धको माध्यमबाट नभई वार्ताबाट समाधान खोज्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ ।